रोल्पामा ३ उदेक ! ‘वर्ग दुस्मन’सँग विप्लवको तालमेल – Enayanepal.com
रोल्पामा ३ उदेक ! ‘वर्ग दुस्मन’सँग विप्लवको तालमेल
२०७४, ४ असार आईतवार मा प्रकाशित
रोल्पा । युद्ध र प्रेममा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि सबैथोक सम्भव हुँदोरहेछ ! कपिलवस्तुमा बम विस्फोट गराएको आरोप खेपिरहेको विप्लव समूहले आइतबार रोल्पाको थवाङमा उम्मेदवारी दर्ता गरायो, त्यो पनि आफैंले ‘वर्गदुश्मन’ मान्दै आएको नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेर ।
रोल्पामै आइतबार दोस्रो रोचक दृश्य देख्न पाइयो । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य भइसकेका व्यक्तिले गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मदेवारी दिए, त्यो पनि पार्टीको आधिकारिक नभएर बागी उम्मेदवारका रुपबाट । तर, स्वतन्त्र हैन, नेकपा मालेसँग चुनावचिन्ह सापटी मागेर ।
थवाङमा विप्लव समूह र कांग्रेसवीच तालमेल
रोल्पामा तेस्रो रोचक घटना चाँहि जिल्लाको माडी गाउँपालिकामा देखियो, जहाँ कांग्रेस र एमालेले चुनावी तालमेल गरे ।
यसलाई रोचक प्रशंग नै मान्नुपर्ने हुन्छ कि देशभर स्थानीय चुनाव बहिस्कार गरेको विप्लव समूहले रोल्पाको थवाङमा भने कांग्रेससँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।
थवाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट अमित घर्तीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अमित नेकपाको युवा संगठन जनस्वंसेवक ब्यूरोको थवाङ प्रमुख हुन् । तर, विप्लवको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले घर्तीले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेसले अध्यक्ष पदमा विप्लव समूहका अमितलाई समर्थन गर्दै उपाध्यक्षमा श्रीकुमारी रोकालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस रोल्पा जिल्ला सभापति एवम् सांसद अमर पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विप्लव समूहसँग तालमेल गरेकाले हामीले उपप्रमुखमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका हौं ।’
पुनले भने-‘विप्लव समूहलाई पनि चुनावमा ल्याउने धेरै पहिलेदेखिको मेरो कोसिस सफल भयो ।’
तर, विप्लवकै बागी !
रोल्पाको राजनीतिमा देखिएको अर्को रोचक घटना के छ भने रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमालेबीच चुनावी तालमेल भएको छ
देशभरिमा एक ठाउँ उम्मेदवारी दिएको विप्लव समूहमै बागी आइलागेका छन् । त्यहाँ भक्तबहादुर घर्तीले पनि स्वतन्त्र रुपमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी अमितका बागी हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका घर्ती साहस उपनामबाट चिनिने विप्लव समूहका स्थानीय नेताका छोरा हुन् ।
यद्यपि विप्लव समूहको आधिकारिक उम्मेदवार भने अमित नै हुन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच अंकमाल
केन्द्रीय राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका कांग्रेस एमाले जिल्लामा यसरी मिल्नु अन्य जिल्लामा अनौठो भए पनि जिल्लामा सामान्य घटना नै भएको माओवादीका एक नेताले बताए ।
तेस्रो रोचक घटनाः केन्द्रीय नेता गाउँपालिकामा बागी
जिल्लामा भएको तेस्रो अनौठो घटना त्रिवेणी गाउँपालिकामा भएको छ । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका कुलानन्द गिरी नेकपा मालेको चुनाव चिन्ह लिएर अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका छन् । त्रिवेणीमा मालेले उपाध्यक्ष पदमा खिउ कुमारी घर्तीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
यसैगरी एमालेले शान्तकुमार वलीलाई अध्यक्ष र सावित्रा बुढालाई उपाध्यक्ष तथा माओवादीले गंगाप्रसाद घर्ती ‘सूर्य’लाई अध्यक्ष र लालसरी घर्तीमगरलाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । –अनलाइनखबरबाट साभार
विदेशबाट रोजगारी गुमाएका भन्छन, स्वदेशमै काम गर्न चाहन्छौँ